नेपाल आज | बिप्लवलाई आत्मसमर्पण गराउन खोज्नु सरकारको भूल, सरकार किन अत्तालियो ? (भिडियोसहित)
बिप्लवलाई आत्मसमर्पण गराउन खोज्नु सरकारको भूल, सरकार किन अत्तालियो ? (भिडियोसहित)
दैनिकजसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सरकारका मन्त्रीहरु नेत्रबिक्रम चन्द ‘बिप्लव’ र उनको पार्टी नेकपाबिरुद्ध बिष बमन गरिरहेका छन् । नेकपालाई आपराधिक समूह घोषणा गरी प्रतिबन्ध नै लगाइसकेपछि चन्दका केही जिम्मेवार नेताहरु पक्राउसमेत परेका छन् । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले हतियार बिसाएर चैत मसान्तसम्म वार्ताका लागि तयार नभए कडा एक्सन लिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र शैलीप्रति स्वयं नेकपा भित्र विवाद छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित राजपा, राप्रपा र नागरिकस्तरबाट समेत सरकारले अभिभावकिय भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।
सरकार अदृश्य शक्तिको प्रभावमा
बिप्लवलाई उत्तेजित पार्ने नभइ विवेकपूर्ण ढंगले राजनीतिक समाधान खोज्न दबाब बढेपनि सरकारले किन नसनुको होला त ? लामो समय जनयुद्धमा समेत संलग्न रहेका वरिष्ठ पत्रकार एवम विश्लेषक नरेन्द्रजंग पीटर भन्छन्, ‘ यसमा आन्तरिक कुरासंगै केही बाह्य फ्याक्टर पनि छन् । सहजै अनुमान गर्न सकिने अदृश्य शक्तिहरुको प्रभावमा सरकार परेको छ । ’
बिखण्डनको लक्ष्य बोकेका सीके राउत हुन वा बिद्रोहमा उत्रिएका बिप्लव हुन्, सबै राज्य सत्ताको बेइमानीका परिणाम भएकाले त्यसको संयमितरुपमा निकास दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त सरकारले झन उत्तेजना बढाइरहेको छ ।
ठूला काण्ड लुकाउन बिप्लवलाई निशाना
सरकारले थुप्रै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने छ । वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड, आयल निगमको अनियमितता, चुडामणि शर्मा काण्ड, ३३ किलो सुन, निर्मला हत्या प्रकरण, नागरिकता बिधेयक, संचार माध्यममाथि अंकुश, बिदेशी हस्तक्षेप लगायत दर्जनौ बिषयमा सरकारमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ । यी प्रश्नको जवाफ दिन नसकेपछि सरकारले बिषयान्तर गर्न बिप्लवमाथि निशाना साँधेको पीटरको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गलत
पत्रकार पीटरले बिप्लव समूहले यदि वार्ताको शर्तका रुपमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बर्हिगमनको शर्त राखेका हुन् भने त्यो उचित नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जस्तै ओठे जवाफ फर्काएको हो भने कुरा बेग्लै नत्र वार्ताका लागि राजनीतिक एजेण्डा अघि सार्ने हो, व्यक्ति प्रधान होइन । ’
बिप्लव भित्रै मतभेद
बिप्लव समूहमा विवाद देखिएको पीटरको पनि विश्लेषण छ । हेमन्त प्रकाश वली, घनश्याम श्रेष्ठ लगायतका नेता पक्राउ पर्दासमेत प्रवक्ता खड्ग बिश्वकर्माको कुनै प्रतिक्रिया बाहिर नआउनु विवादकै नतिजा हुन सक्ने उनको आंकलन छ ।
यस्तै, बिश्वकर्मा र वलीबीचको मतभेदले पनि क्रान्तिको अभियान सशक्त हुन नसकेको हो । अझ सरकारले पनि बिप्लवलाई प्रमुख निशाना बनाएपछि ‘ब्याकफुट’ मा जानुपर्ने स्थिति बनेको पीटर बताउँछन् ।
‘बिप्लव मानौ पक्राउ परि हालेपनि बिद्रोह रोकिदैन । यसका लागि राज्यसत्ताले बिभेदकारी नीति अन्त्य गर्नैपर्छ ’ पीटरको भनाइ छ ।
मिडियालाई धम्की नदेऊ
बिप्लवको बाहनामा संचारमाध्यम र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत निगरानीमा राखेको भनेर सरकारले धम्की दिनु बिडम्बना हो ।
‘सरकार अभिभावक हो, त्यही अनुसार प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकारले कविता नलेख, गीत नगाऊ, लेख नलेख, भाषणा नगर भनेर पनि हुन्छ ? यदि त्यसो भयो भने त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै पतन गराउने छ ।’ पीटरले भने ।